Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Ny fangatahana fitsangatsanganana an-habakabaka an-trano dia mahita fitomboan'ny volana martsa saingy mbola mihena ny dia iraisam-pirenena
Ny fitakiana totalin'ny dia an-habakabaka tamin'ny martsa 2021 dia nidina 67.2%
Ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena tamin'ny volana martsa dia 87.8% ambanin'ny martsa 2019
Voafetra ihany ny fifamoivoizana iraisam-pirenena
Ny fitakiana anatiny dia nidina 32.3% raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanambara fa ny fifamoivoizana mpandeha dia nianjera tamin'ny volana martsa 2021 raha oharina amin'ny ambaratonga talohan'ny COVID (martsa 2019) fa nitombo raha oharina tamin'ny volana teo alohan'io (febroary 2021).
Satria ny fampitahana eo anelanelan'ny valiny 2021 sy 2020 isam-bolana dia voarebirebin'ny fiatraikan'ny COVID-19 tsy manam-paharoa, raha tsy misy fanamarihana hafa dia hatramin'ny martsa 2019, izay manaraka ny lamina fangatahana mahazatra.
Ny fitakiana totalin'ny dia an-habakabaka tamin'ny volana martsa 2021 (refesina amin'ny kilometatra mpandeha amin'ny fidiram-bola na ny RPK) dia nidina 67.2% raha oharina tamin'ny martsa 2019. Izany dia fanatsarana ny fihenan'ny 74.9% voarakitra tamin'ny febroary 2021 nifanandrinana tamin'ny febroary 2019. Ny tombom-barotra tsaratsara kokoa dia nateraky ny tombom-barotra amin'ny tsena anatiny, indrindra ny Sina. Voafetra ihany ny fifamoivoizana iraisam-pirenena.
Ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena tamin'ny volana martsa dia 87.8% ambanin'ny martsa 2019, fanatsarana kely dia kely tamin'ny fihenan'ny 89.0% voarakitra tamin'ny febroary 2021 raha roa taona lasa izay.
Ny fitakiana an-trano tanteraka dia nidina 32.3% raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy (martsa 2019), nihatsara fatratra tamin'ny febroary 2021, raha nidina 51.2% ny fifamoivoizana tao an-toerana raha oharina ny tamin'ny taona 2019. Ny tsena rehetra afa-tsy Brezila sy India dia naneho fihatsarany raha oharina tamin'ny febroary 2021, ka i China no mpandray anjara fototra, araka ny efa voalaza.
"Ny fiakarana tsara hitantsika tany amin'ny tsena anatiny sasantsasany tamin'ny volana martsa dia fampisehoana ny fanarenana matanjaka andrasana amin'ny tsena iraisam-pirenena rehefa esorina ny fameperana ny dia. Te sy mila manidina ny olona. Ary afaka matoky isika fa hanao izany izy ireo rehefa esorina ny fameperana, ”hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.